डुमेरो [पुस्तक अंश]- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
समाचारमा फोटोचाहिँ गाउनमा पोखिएको वाइनको दागसहितको थियो । वाइन लिन निहुँरिँदै गर्दा देखिएको क्लिभेजसहितको अर्को फोटो पनि थियो ।
श्रावण २४, २०७७ सरला गौतम
तीन महिना भयो डेरामा बस्न थालेको । अनामनगरमा । एक्लै । दुइटा ससाना कोठा, बरन्डासहित । बार्दलीबाट देखिने अगाडिको खाली भागमा रूखबिरुवा पनि । काठमाडौंको मध्यभागमा यतिको हरियो काफी लागिरहेको छ । छेउमा एकजना वकिल बस्छन् । घरबेटी माथिल्लो फ्ल्याटमा बस्छन् । पानी ठीकै आउँछ ।
सामानको नाममा एकजोर सिरक–डसना र झोलामा केही कपडा । डसना भुइँमा प्लास्टिक ओछ्याएर फिँजारेकी छु । अरू सामान केही छैन । नाटकबाट आएको पैसाले चुलो किनेकी छु । खाट किन्न सकेकी छैन । भाँडाकुडा एकएक सेट छन्, पकाउने र खाने । सुप्रियाकहाँ जान नपाएको दिन एक छाक मात्र खाने गरेकी छु ।
बिहान उठेँ कोठाभरि मन पोखियो, असरल्ल । खानेकुरा सबै सकिएको छ । चामल, दाल, तरकारी केही छैन ।
ओछ्यानको पत्रबाट पचास रुपैयाँ निकालेँ । दूध र बिस्कुट किन्न हनुमानथान चोकतिर गएँ । बाटोमा नारायणगढका एक चिनेका मान्छे भेटिए । छलेर हिँड्न खोज्दा पनि देखिहाले । नजिकै आएर मलाई तलदेखि माथिसम्म नियाले ।
निकै बेरपछि मुस्काउँदै उनले भने, ‘कति दुब्ला’की ! अलि खाने गर । जीउडाल त भरिलो–पोषिलो पो राम्रो !’
मैले भनेँ, ‘दुब्ला’को होइन, स्लिम भ’को । मेरो पेसा नै त्यस्तो छ ।’
ओठ लेब्य्राउँला जस्तो गर्दै उनी एकातिर लागे । ठीकै भयो ।
यता सुइँय्य सिटी बज्यो । यसो हेरेको डिस्को रैछ । उसले सिटी फुक्यो, मोटरहरूको अघि उभिएर हात हल्लायो । अनि गएर रूखमुनि बस्यो । पसलछेउ उभिएर यो सब हेरेँ ।
पसल र घरको दूरी धेरै छैन । पसलको छेउमा एउटा रूख छ । रूखमुनि सुस्ताएर बसिरहन्छ डिस्को । ऊ त्यहीँ सुत्छ । तीस हाराहारीको मानिस छ । उसको साथमा एउटा कुकुर छ । काँसी भनेर बोलाउँछ । पुक्कपुक्क गाला भएको डिस्कोको अनुहारमा अजिबको शान्ति छ । मोटेमोटे, डल्ले छ । कसैले केही दिए हात थाप्छ । माग्दैन । हातमा एउटा सिटी टुट्दैन । बाटोमा भीड बडेपछि आएर फुक्न थाल्छ । ‘ट्राफिक हुँ म’ भन्छ । उसको नरम मिजासकै कारण मानिसहरू उसलाई केही न केही दिइरहन्छन् ।
नजिकै गएँ । उसको खबर सोधेँ । कसैले उसको सिरक चोरिदिएछ । उसले खबर बुझाउँदै गर्दा रूखमा आयो एउटा काग । मैले पीर जताएँ, ‘अब के गर्छौ त ? अहिले त जाडो छैन । जाडो महिनामा के गर्ने ?’
उसले मस्त अन्दाजमा भन्यो, ‘त्यो बेलासम्म कसै न कसैले दिइहाल्छ नि !’
काँसी उसको छेउमा आयो । डिस्कोले उसको गर्दन मुसारिदियो । मैले एउटा ग्लुकोज बिस्कुट डिस्कोलाई दिएँ । उसले धन्यवादको भावमा टाउको हल्लायो । खोल्यो । तीन पुरिया काँसीलाई दियो । एउटा मिचेर कागलाई भन्यो, ‘आइजा खा ।’
डिस्कोलाई फर्कीफर्की हेर्दै म कोठातिर गएँ । मेरो ज्यान साँच्चै गल्दै गएको छ ।
दूध लिएर कोठानजिक पुग्दा घरबेटीको टेलिफोन बज्यो । अडिएर सुनेँ । मैलाई कसैले फोन गरेका हुन् कि ? निर्माता र निर्देशकहरूलाई घरबेटीकै फोन नम्बर बाँडेकी छु ।
फोन मेरो होइन रैछ । बोलाएनन् । कोठाभित्र छिरेँ ।
चियामा सातु घोलेर खाएपछि बीपीको आत्मवृत्तान्त पढ्न थालेँ । बनारस बस्दा एक छाक चनाको झोल र भात खाएको प्रसङ्ग । हिजोदेखि आफैँ पनि त्यसमै अडिएकी छु । मेरो कोठामा त चना पनि छैन !
एक बजे डेराबाट निक्लेर पशुपतिनाथतिर लागेँ । ज्ञानेश्वरमा ठेलामा रसिला तरबुजा देखिए । एक छिन अडिएर हेरिरहेँ । ठेलावालाका आँखा पनि मैतिर सोझिन थाले । अनि हिँडें ।
अलि पर पुगेपछि दुई घोगा हरिया मकै किनेँ । पैसा पनि सकियो ।
ब्यागबाट बोतल निकालेर पानी खाएँ । उमालेर हालेको पानी अझै सेलाएको रहेनछ । तरबुजाको तलतल मन तातो पानीले मेटेन ।
पशुपतिनाथ पुगें । मूल ढोकाबाट भित्र पसें । ज्योतिर्लिङ्ग देखिने गरी वरै बसें, सिँढीमा । मूर्तिलाई एकोहोरो हेरें । आँखामा तलाउ जम्न थाल्यो । आँसु रोकेँ । र मनमनै भनें, ‘शम्भो मलाई बचाइदेऊ मात्र, बाँकी काम त म आफैं गर्छु !’
निकै बेर बसेपछि उठें । कता जाऊँ ! लागें आर्यघाटतिर । धूवाँधूवाँ मानिसको जिन्दगी ! मैले पनि छाडिजाने होला । यो अनित्य चोला । आगोमा पोलिएझैं लागेको यो समय पनि हुने त होला, यसरी नै धूवाँधूवाँ ।
वाग्मती पुल तरेर सिँढी उक्लिएँ । अलि माथि एकातिर तीन–चार जना जोगीले चिलिम तान्दै रैछन् । म त्यतै गएँ । यिनलाई कति आनन्द ! मैले एकोहोरो हेरिरहेँ; उनीहरू मलाई हेरेर हल्का मुस्कुराए । मैले गाँजा मागें एक जनासँग । एकजना ताइरे ज्यानधारीले चुरोटमा गाँजा भरेर सल्काएर दिए । सजिलै, पानी दिएजस्तै ।
मैले गाँजा तानें र धूवाँ घाँटीबाट तल नझारी उडाएँ । ‘खान जानेन’ भन्दै जोगीहरू हाँसे । उडेको धूवाँलाई हेरिरहेँ । धूवाँमै हराइरहेजस्तो लाग्यो मनका सन्तापहरू । वरिपरिका मानिसहरू मलाई हेर्दै हिँडें । भन्नै मन लाग्यो, ‘हे मानिसहरू, हृदयको आगो देखिन्न । देखिन्छ त केवल धूवाँ ।’
यो मादक धूवाँसँगै उडिजान पाए कतै । आहा !!
एक खिली उडाइसकेपछि जोगीहरूलाई ‘जय शम्भो’ भनें । उनीहरूले कोरसमा फर्काए, ‘जय शम्भो !’
म भने आएकै बाटो फर्कें । आरतीको बेला भइसकेको रैछ ।
नीलोनीलो आकाशमुनि कैलाशपतिको यो अखडा । जिस्क्याएर जूनको उज्यालोलाई बल्न थाले दियोहरू । प्रदीप्त पारिदिए हृदयको एउटा कुना ।
‘हे शम्भो तिमी मालिक कैलासको
म महारानी आफ्नै साम्राज्यको
कण्ठभरि बोकेर विष समुद्रको
जसरी मुस्काउँछौ तिमी
पिएर सप्पै सहरको विष एक दिन
के सक्छु होला म पनि उन्मुक्त हाँस्न ?’
मेरो हातमा ‘नगरी’ छ । पल्टिएको पानामा मेरै समाचार छ, ‘अभिनय एक आना, फेसन र नखरा चार आना’ शीर्षकमा । लेखिएको छ—
‘सिनियर कलाकारदेखि पत्रकारसम्म कसैलाई मिजास नदेखाउने सिमरन घमन्डको पोको नै हुन् । सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेको तीन–चार वर्षमै उनले आफ्नो कला र मेहनतले सफलता हासिल गरेकी होइनन् । उनको चलाखी, निर्माता–निर्देशकसँगको उठबस, अरू हिरोइनलाई पाखा लगाउन सक्ने ‘खुबी’ उनी चम्कनुको मुख्य कारण हो । शुक्रबार हिमालयन होटलमा भएको एउटा पार्टीमा हातमा वाइन समातेर हल्लिरहेकी सिमरनले छाती ह्वाङ्ङ देखिने लुगा लगाएकी थिइन् । सहरका प्राय: सबै निर्माता र निर्देशक जम्मा भएको उक्त पार्टीमा सबैको ध्यान आफूतिर खिच्नु उनको उद्देश्य देखिन्थ्यो । रूपक नामका सामान्य निर्मातासँग सिमरनको लामो अफेयर पनि हिमालयन होटलको हलमा पोखिएको थियो । वाइनले ढलपल गर्दै गरेकी सिमरनको कम्मरमा रूपकको हात घरीघरी पुगिरहेको थियो । अभिनयमा दक्खल भएका तर नखराले चलखेल गर्न नसक्ने नायिकाहरू सिमरनकै कारण ओझेलमा छन्... ।’
समाचारमा फोटो चाहिँ गाउनमा पोखिएको वाइनको दागसहितको थियो । वाइन लिन निहुँरिँदै गर्दा देखिएको क्लिभेजसहितको अर्को फोटो पनि थियो ।
केही वर्षअघि श्रीषा कार्कीले यस्तै समाचारका कारण आत्महत्या गरिन् । उनका लागि म कति रिसाएकी थिएँ ! आज रिस उठेन; मेरा नौनाडी गले । यो समाचार बाआमाले पढे के भन्लान् ? के भन्लान् आफन्तले ? अरूका बारेमा पढ्दा त हिरोइनका बारेमा यस्तो लेखेछ भन्दै पत्रिका हेर्थे !
निर्माताहरूसँग साँठगाँठ ! सुनाकोठीतिर कुन मारवाडीले घर पनि किनिदिएको छ रे मलाई ! आफ्नो कमाइचाहिँ फ्ल्याटको भाडा तिर्दातिर्दा सकिन्छ !
फेसबुक खोलेर हेरें । फिल्म उद्योगका केही मानिसले लेखको स्क्रिनसट सेयर गरिसकेछन् । मेरो छाती ह्वाङ्ङ परेको छ । नशामा मदहोस भएजस्ता आँखा । ढल्केको ज्यान । बीचसडकमा नाङ्गै छुजस्तो लाग्यो ।
मोबाइल बज्यो । उठाइनँ । पत्रिका कुनामा मिल्काएर बसिरहें, एकै ठाउँ । कम से कम रूपक दाइसँग त नाम नजोडिदिएका भए हुने नि ! भोलिदेखि म कसरी बाहिर निस्कनु ! घर कसरी जाने होला ! यहीँ घरबेटीले के सोच्ने होलान् ! कहाँ लुकाउने होला मैले आफूलाई !
राति आठ बजेको समाचारको धुन बजेको सुनियो, छिमेकको टीभीमा । दूध तताएँ; ओछ्यानमा बसेर पिएँ र ग्लास छेउमा राखेर पल्टिएँ । तेजाबले शरीरमा पोलेसरि पोल्यो । सरेयाम बीच सडकमा राखेर कसैले ढुङ्गा हानेसरि दुख्यो ।
उठेर दराज खोतलें । अर्जुन–कृष्ण संवाद पढ्न कोसिस गरें । सकिनँ । कसरी भन्छौ कृष्ण– यो तिमीलाई दुखेको होइन, फगत भ्रम हो भनेर ? तिम्रो शरीर र आत्मा फरक हो भनेर ? सास आएर घाँटीमा रोकिन्छ जस्तो भयो । युट्युबमा ‘महाभारत’ खोजेँ ।
मर्छुजस्तो लागेको दिन ‘महाभारत’ हेर्ने गर्छु । यो जीवनमा कर्मले अघि बढ्छु जस्तो लागेको दिन ‘महाभारत’ हेर्छु ।
घरको सम्झ्ना आयो । अनि सम्झिएँ ती साँझहरू । बाको लयात्मक आवाजमा ‘महाभारत’ का श्लोक सुनिरहेको । ‘आज कोही रुन पाउँदैन, नत्र म पढ्दिनँ’ भन्दै लगाएको घुर्की । वरिपरि हामी बसेको । ‘हुन्छ, रुन्नौँ’ भनेर वरिपरि बसेर सुनेका कथा । सुरु भएपछि मनमा छाएको बादल । नथामिएर भिजेका आँखा । बाहुलाले पुछेको आँसु । अभिमन्युको चक्रव्यूहको कथा सुरु नहुँदै रुन थाल्थेँ म । एक छिनमा रुनुपरिहाल्छ, देर किस बात की भने जस्तो गरी † बा मलाई हेरिरहन्थे । अनि पुस्तकको पानो बन्द गर्थे ।
बा, आज म आफैँ चक्रव्यूहमा परेकी छु ! म मर्छु कि निस्कन्छु होला, बा ?
कामेको हातले युट्युब अन गरेँ । ‘द्रौपदीको चीरहरण’ । दु:शासनले घिसार्दै सभामा ल्यायो । एकएकले अपमान गरे । भीष्म, द्रोण र विदुरले शिर निहुर्‍याए । उनका पाँच पतिले शिर निहुर्‍याए । अनि तान्न थाल्यो दु:शासनले सारी । ‘कृष्ण ! कृष्ण !’ पुकार्छिन् द्रौपदी । छोपिदिन्छन् लाज कृष्णले ।
हे केशव, द्रौपदीको त तिमी थियौ; म पुकारूँ कसलाई ?
-सरला गौतमको भर्खरै प्रकाशित उपन्यास ‘डुमेरो’ अंश
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ १५:११
जीवनले दिने आनन्द हामीले लिनै सकेका छैनौं किनभने हामीले माटोसँग धीत मर्ने गरी खेलेकै छैनौं । जीवन जसरी बाँचिनुपर्ने हो, त्यसरी बाँचिएको छैन ।
जेष्ठ ३, २०७७ सरला गौतम
विपश्यना ध्यानका गुरु आचार्य गोयन्काले सुनाएको एउटा कथा छ । एक जना पिताले चार दाना धानको बीउ जोगाएर राखेका हुन्छन् । एक दिन चार जना बुहारीलाई बोलाएर भन्छन् ‘जसले यो चार दाना बीउ जतनले पाँच वर्षसम्म राख्न सक्छ, उसैलाई म सन्दुकको चाबी सुम्पिन्छु ।’ चारमध्ये पहिलीले ‘ह्या यो बूढोको पारा’ भन्दै बीउ मिल्काउँछिन् । दोस्रीले चाबीको लोभमा धानको दाना बाकसमा लुकाउँछिन् ।
तीन नम्बरकी बुहारी सोच्छिन्- बूढाले यसै यो कुरा भनेनन्, पक्कै यो दानामा केही रहस्य छ । खाएपछि फलिपाप होला भनेर खाइदिन्छिन् । चार नम्बरकी बुहारी खेतमा जान्छिन्, बीउ जमाउँछिन् । बीउबाट बोट बन्छ । बोटबाट असंख्य बीउहरू । अनि पूरै खेत लहलह बन्छ । काटेर गोदाममा थन्क्याउँछिन् । पाँच वर्षपछि पिताजीले सबैसँग बीउको खबर सोध्छन् । सबैले आफ्नो बीउको कथा भन्छन् । चौथो नम्बरकी बुहारीले ‘तपाईंको बीउ हेर्न जानुस्’ भनी गोदामको चाबी दिन्छिन् । ससुरा भन्छन्, ‘एक यो बुहारी कामकी रहिछ ।’ सन्दुक र गोदाम दुवैको चाबी कान्छीले समाउँछिन् ।
बीउ जोगाउने, बाली फैलाउने, जीवनको रक्षा गर्ने प्राकृतिक नियममा हिजो हजुरआमाहरूको पकड थियो । आजको संसारमा यो हक उनीहरूबाट खोसिँदै छ । प्रकृति र खेतीमाथि पकड राख्ने महिलालाई किसान भन्न पनि गाह्रो मानिन्छ । अधिकांश पेसागत शब्दको भाषिक कनोटेसन पुलिंगी भएजस्तै किसान शब्दले पनि महिलाप्रति कम इंगित गर्छ । किसानी कर्मलाई निर्मम नाफा-घाटाको संसारमा परिणत गर्न लागिपरिरहेका मानिसहरूको ज्ञानलाई सर्वोच्च मानिएको छ ।
भारतीय पर्यावरणविद् बन्दना शिवा भन्छिन्, ‘वर्षमा दुई लाख किसानले आत्मदाह गर्ने देश समृद्धिको बाटोमा छ भन्न मिल्दैन । विश्वमा कुनै पनि देशको शक्ति र चमकको मानक किसानको जीवनको उन्नतिलाई मानिनुपर्छ । शक्तिशाली राष्ट्रको परिभाषा मेजर गर्ने स्केल किसानको जीवन हुनुपर्छ ।’ शिवाले भनेजस्तो परिदृश्य भेट्न मुस्किल छ । अहिलेसम्म किसानबारेका सामग्री सञ्चारमाध्यमका कुनोमा लुकाइएका हुन्छन् ।
संसारको आँखा उनीहरूमा कसरी परोस् १ खेतबारी हुनु, आफ्नो उब्जनी हुनुको महत्त्व अहिले कोरोना संकटले सम्झाउँदै छ । मानिसहरू घरघरबाट प्रकृति नियालिरहेछन्, जमिन नहुनेहरू पनि कौसी खेतीतिर लागिरहेका देखिन्छन् । लेखक जीवन राईले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘हामीसँग मकैको बीउ पनि रहेनछ भन्ने कुरा कोरानाले थाहा दियो ।’ कहाँबाट हाम्रो खाना आउँछ, खानाका बीउहरू कहाँ छन् हामीलाई मन्द होस आउँदै छ । सन् २०१९ को ‘टाइम म्यागेजिन’ ले किशोरी पर्यावरण अभियानकर्ता ग्रेटा टुनबर्गलाई वर्ष व्यक्तिको रूपमा कभर गर्‍यो । यसले अबको संसारमा को प्रभावशाली व्यक्ति भन्ने मानक बदल्ने संकेत गरेको छ । त्यस कभरेजलाई लिएर ट्रम्प र उनका समर्थकले चर्को प्रतिक्रिया गरे । उनीहरूको कमजोर हृदय हल्लियो । प्रभावशाली व्यक्ति को भन्ने मानक अब भत्किन सुरु हुनैपर्छ । संसारमा अहिले हाबी भएको आर्थिक संरचनाले मानिसलाई आइसोलेसनमा काम गर्न बाध्य पारेको छ । मानिस समूहमा रमाउने प्राणी हो । उसको सामाजिक-पारिवारिक जीवन खोसिएको छ । श्रमिकहरूको हातबाट जीवनप्रतिको स्वामित्व खोसिएको छ । यसको खास कारण माटोसँगको उसको आत्मनिर्भर सम्बन्ध नहुनु नै हो । मान्छेले आफ्नै जीवनमाथि अरूको राज सहेर बसेको छ । गान्धीले भनेजस्तै स्वराजमा फर्कन मानिस माटोमै फर्कने हो ।
आजको समयमा एकै परिवारका सबै मानिस आफ्नो खेतीबारीको काममा हुनु भनेको दुर्लभ दृश्य छ । तर, आधारभूत जीवनशैली त यही हुनुपर्थ्यो । यहीबीच सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो देखियो— नेपाली श्रमिकलाई भारतीय अधिकारीहरूले अपमान गरेको । देशको माटोले मान गुमाएपछि मानिसको मान कसरी रहोस् १ उनीहरूलाई गरेको अपमानको रापले हामी सबैलाई पोल्यो । साना-साना किसानले सजाएको सुनौला संसार उजाड हुँदै गए । मानिसहरू जीविकाका लागि लाखापाखा लागे । पारिवारिक सामाजिक जीवन मात्र होइन, आत्मसम्मान नै धरापमा परिरहेको छ । हामीले गुमाइरहेका छौं— ओल्लो घर, पल्लो घर बोल्दै हिँड्ने हँसिला मानिस । हराभरा गाउँघर, रमाइला आँगन र गुञ्जायमान रोधीघर ।
दशकअघि भारतीय खाद्य अधिकारकर्मी रुक्मिणी रावसँग प्रशिक्षण लिने मौका मिलेको थियो । उनले बताएको खाद्य सम्प्रभुता र भारतीय किसानको आत्महत्याको प्रसंग मस्तिष्कमा घुमिरहन्थ्यो । लगभग सोही समयमा भेट भएका पत्रकार पी. सैनाथले यसलाई थप प्रस्ट पारिदिएका थिए । अधुरो ज्ञान मस्तिष्कमा थियो । जब अकबरे खुर्सानीको बीउ जमाएर बिरुवा हुर्केको हेरें, यही सानो उपलब्धिले हृदयमै बोध पुर्‍याइदियो । माटो र बीउसँग जोडिएको आफ्नो जीवनको पाटो बुझ्न हातमा माटो लतपतिनैपर्ने रहेछ । हातमा आफ्नो बीउ हुनु भनेको अभूतपूर्व स्वतन्त्रता रहेछ । यति सानो कुरामा स्वतन्त्रताको कति ठूलो अर्थ लुकेको रहेछ । यो थाहा पाएर म साँच्चै खुसी भएँ ।
मेरो एक जना मित्रले जागिरको सिलसिलामा तीन महिनासम्म पानीजहाजमा यात्रा गरिन् । संसारका सबै सुविधा भोगिन् । जहाजमा केवल मानिसहरू थिए । पानीमाथि हिँडिरहने जहाजमा माटो र अरू प्राणी थिएनन् । काम सकिएपछि उनको जीवन जमिनमा फर्कियो । उनले बारीमा मुसाहरू दगुरेको देखिन् । मुसा देखेरै खुसी भइन् । मसँगको संवादमा भनिन्, ‘हेर मानिसलाई खुसी हुन पैसा र सुविधा मात्र होइन मुसा, साङ्ला र गँड्यौला पनि चाहिने रहेछ ।’ हामीले हेपेका जीवहरूको अभावले पनि हाम्रो जीवन सुनो हुने रहेछ । माटोमा चलिबस्ने जीवजन्तु हेर्न आँखा न्यास्रिने रहेछन् । हाम्रो सुख माटोले नै बोक्ने रहेछ । पहाडले पनि जमिन छोड्यो भने त्यो केवल ढुंगा-माटोको थुप्रो हुन्छ । जमिनमा उभिएको हाम्रो जीवनको अस्तित्वको आधार पनि जमिन नै हो ।
संसारमा अहिले आधुनिक सुखसयलका कत्ति विषय बन्द भए १ मानिसहरूलाई फरक परेन । तर हावा, पानी, माटो र माटोले दिने उब्जनी सकिएको दिन के होला हाम्रो जीवन ? मानिसको जीवन माटोदेखि माटोसम्म नै हो ।
सन् २००९ मा सिरियामा ठूलो खडेरी भयो । मौसम परिवर्तनले कृषिमा हान्यो । धेरै मानिस कृषि कर्मबाट विमुख भए । गृहयुद्धको चपेटामा पनि उनै थिए । सिरिया कृषिको आधारभूमि मानिएको देश हो । मकै, गहुँ, जौको भण्डार । यस्तो सुनौलो भूमिका बालबच्चा बाउ-आमाका काखमा च्यापिएर हिँडेको दृश्यले विश्व हल्लायो । ९ लाखभन्दा बढी सिरियन शरणार्थी बने । सिरियाका ऐलान नाम गरेका बालक टर्कीको समुद्री किनारमा घोप्टो परिरहेको मृत अवस्थामा भेटिए । यो दृश्यले विश्व रोयो । पर्यावरणविद् बन्दना शिवा भन्छिन्, ‘नामजस्तै ऐलान एउटा अभूतपूर्व सन्देश हुन् संसारका लागि । तेलको युग सकियोस् ताकि माटोको युग सुरु होस् । उनको सन्देश यही हो ।’ माटोमा मिल्दै गरेको ऐलानको कोमल देहले संसारलाई माटोमा फर्कन उद्घोष गरेर गयो । कोरोना संकट एउटा यस्तै महावाणी हो, प्रकृतिको । अब हामीले प्रकृतिलाई जीवनसँग जोडेनौं भने हाम्रो अस्तित्व धरापमा पर्नेछ । मानवशास्त्री मेरि डेसनले केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘प्रकृतिलाई पनि माया गर्ने समाज व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छ ।’
हाम्रो शरीरको केही अंग माटोमा राखिदिने हो भने त्यो माटोसँगै मिसिएर माटै बन्छ । माटोसँग खेल्दा अचानक मानिसको मुहारमा खुसी फर्केर आउने, मुस्कान लयमा आउने हुँदो रहेछ । आफ्नो अस्तित्वसँग मिलेकोमा हाम्रो शरीरका कोषहरू खुसी भएका होलान् । हाम्रो आयातित बौद्धिकताले ठानेभन्दा भिन्न विषयमा हामी किन अचानक रमाउँछौं भन्दा हाम्रो शरीरको प्राकृतिक माग अर्कै होला । यसकारण हाम्रो उपलब्धिको चाङ र खुसीको रेसियो मिलिरहेको देखिन्न ।
यशोधराको जीवन-कथा पढिरहेकी थिएँ । राजा सुद्धोधनकी श्रीमतीले प्रसव पीडाको कारण देह त्याग गर्छिन् । राजा यति विरहमा डुब्छन्, त्यो पीडाबाट बाहिर आउनै सक्दैनन् । अन्तत: उनी आफ्नो निजी बगैंचामा समय बिताउन थाल्छन् । बगैंचामा समय बिताउन थालेपछि मात्रै राजाको होस फर्केर आउन थाल्छ । काम पर्‍यो भने पनि उनका मन्त्रीहरू बगैँचामै भेट्छन् । अति विरहमा पुगेका मानिसलाई पनि माटोको स्पर्शले जीवनमा फर्काउने रहेछ । माटोमा लुकेको जीवनको रहस्य माटै नछोई कसरी भेटिएला र १ माटोमा मन गड्न सक्यो भने सुखको रहस्यमयी यात्रा सुरु भयो भन्ने बुझे हुन्छ ।
मानिसहरू सहर-बजारका साना आपर्टमेन्ट अझ कति त एक-दुईवटा कोठामै जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । जैविक फोहोरको थुप्रो लाग्छ । कहिलेकाहीँ भनेको बेला नगरपालकिकाको मोटर आउँदैन । यस्तो बेला थुप्रिएको फोहोरको गन्धले दिमागको शक्ति नै खाइदिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रशस्त ठाउँ हुँदैन र समस्यामा परिन्छ । सानै ठाउँमा पनि छेउ-कुनातिर गमलाहरू, पुराना बाल्टीहरू, बाटाहरूमा केही रोपिएको छ भने यो दु:ख कम हुन्छ । किचन बगैँचा वा कौसी बगैँचा बनाउने थोरै मात्र ठाउँ छ भने सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो । अब आफ्नोवरिपरिको ठाउँलाई थोरै र सानो भनेर हेला गर्नुभएन । न्युयोर्कलगायतका सहरका साना अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूले कोठालाई नै जंगलमा बदलेका दृश्यहरू युट्युबमा छ्यापछ्यापी छन् । आफ्नो करियर निर्माण गर्दै गर्दा माटोको स्पर्शबाट हामी परपर पुगेको छौं । यस्तो बेला स-साना ठाउँमा ठूला रहर सजाउनु नै एउटा उपाय हो । माटोसँगको सामीप्य पाएपछि हृदयको रस फर्किन्छ । डस्ट टु डस्ट, माटोमै मिलेर जाने देह भएकाले त माटोमा हातका औंलाहरू चलिरहँदा मन नाचिरहेको हुन्छ, मन हाँसिरहेको हुन्छ । माटोमा खेल्नु हाम्रो लत भइदियो भने धरती कति खुसी होलिन् !
कुनै बेला वरिपरि हेर्दा कतै पनि माटो नदेखेर छट्पटिन्थें । गमलाहरूमा भर्न पनि माटोको अभाव हुन्थ्यो । किनेको माटोमा भान्साको फोहोर मिसाएर यसको आयतन बढाउन थालें । फोहोरहरू जम्मा गरी माटोमा पुरेर माटो बनाई निकाल्दा जादु गरेजस्तो लाग्न थाल्यो । भान्साबाट निक्लेको फोहोरले कमपोस्ट बनाउनु संसारकै सेक्सी कुरा हो भन्छन् अमेरिकन गार्डनर रोन फिन्ले । आहा १ कस्तो जादुमयी रूपान्तरण । आफ्नो कारणले माटोको आयतन बढ्यो । राम्रो खान पाएर माटो पनि रमायो । अब उसले बिरुवाहरूलाई आफ्नो जीवन दिनेछ । माटो छोइरहँदा माटोको शक्ति आफ्नै शरीरका कोष कोषहरूमा फैलिनेछ र हाम्रो शक्तिलाई दसौं गुणा बढाइदिन्छ । नगरपालिकाले फोहोरका लागि सिठी फुक्दै आउँदा ‘आई एम सरी’ भन्न पाइन्छ । डा. उपेन्द्र देवकोटा भन्ने गर्थे, ‘आफूले खाने तरकारी आफैँ उब्जाउनुको आनन्द भन्नै सकिन्न ।’ जीवनले दिने आनन्द हामीले लिनै सकेका छैनौं, किनभने हामीले माटोसँग धीत मर्ने गरी खेलेकै छैनौं । जीवन जसरी बाँचिनुपर्ने हो, त्यसरी बाँचिएको छैन ।
कटिङ गरेका हाँगाले जरा निकाल्दा, जमाएका बीउहरू बिरुवा बन्दा, हुर्केका बोटहरूले फल र फूल दिन थाल्दा धरती आफैंसँग रमाइरहेको हुन्छ । चुल्होमा कराई बसालेर फुत्त निक्लेर, टप्प-टप्प खुर्सानी टिपेर तेलमा पड्काउनु ! उन्मत्त भएर फलेको राता-राता गोलभेंडालाई टप्प-टप्प टिपेर तरकारीमा हाल्नु ! मन्किएका लसुन प्याज, पुदिना र धनियाँले भान्सा नै मगमग बनाउनु ! यही त हो संसारको जादु ! किन नबन्ने जादुगर !
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ११:३०